Last updated: May. 21 2018 | 3 min akhri
Inta badan ragga Adduun roonaatid, dadka cajiib ah qalbigiinna oo si weyn qodobkan waa gudaheedana sinaba uma ay iyaga dissing. Waxaa ku saabsan yahay 5% kuwaas oo aan ku dhicin category in. Inkastoo in in 5% u badan tahay waxaa jira dad badan oo fiican, wax saaxiib kaliya ma wanaagsana ama iyagu ma ay heleen addoon ka mid ah weli cida ay ku dhici lahaa gadaal ka badan in ay sameeyaan wax walba. In this article waxaan doonayaa inaan wax ka qoraan shan hab oo this 5% burburisay kartaa xiriir.
Arinta ku saabsan marka qofka qiyaanoole waa in ay ka badan tahay ma aha in jacayl la qofka ay la tahay. Markii nin waa jacayl qof uu si fudud ma khiyaameeyaan doonaa iyaga on sababtoo ah qof walba iyadana la barbardhigo. Taasi ma aha in la yidhaahdo ma uu fiirin oo mana uu arki karaa in qof wanaagsan-raadinta. Waxaan qabaa inaan dhan doonaynin in la been haddii aan sheegay in markii aynu xiriir ma aynu ku samaynay laakiin farqiga waa marka aad ku sugan tahay jacaylka aadan u dhaqmaan waxa on. Sidaas daraaddeed markii nin qiyaanoole waxa uu muujinayaa in kii aan waa jacayl isaga iyo saaxiibkii oo waxay abuurtaa la'aan ah trust in badan oo lamaane ma iman karo ka dib.
Falimaha Rasuullada Like Jerk A
Xumeyn ma aha eegno qabow. Laakiin waxaa jira guys kuwa nasiib u maleyso inay tahay. Qaar ka mid ah xitaa qabaa inay tahay qabow iyo “sida nin dhaqmaan waa” iyo qashin oo dhan. Isagu ma in la ordaya oo ubax shan daqiiqo kasta laakiin ma qaadan badan oo kaliya in ay noqon fiican. In si aan fahmi sababta badan oo guys mararka qaar u dhaqmaan sidan haddii aanay li'I ah oo qoto dheer hoos. Dad badan ayaa u sameeyaan sida qof wiil xun oo dhan laakiin waxaan qabaa meesha isgaarsiinta ee uu isku darsan jirto in ay doonayaan wiil xun qalbi wanaagsan oo iyaga si wanaagsan ula dhaqmi doonaan, oo waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya wiilka xun qalbi wanaagsan oo qof ku fiicnayn in aad iyo aad joojisey waqtiga oo dhan hoos. Waxaan qabaa naxariis mararka qaarkood waxaa laga arki karaa sida tabar ah marka Dhab ahaantii waa xoog ah oo inta badan xiriir fiican yihiin meesha labada dadka iyo sidoo kasta oo kale oo lagu daweeyo.
Hits waxay Partner
Sida qoraalkan ku saabsan guys waa inaan qoraal ahaan qaybtan ku saabsan nin garaacid lammaanahooda laakiin qaybtan, sida qaybta kasta waxa ku jira, ayaa laga yaabaa codsatay in ay wax naag sameeya burburisay xiriir aad sidaas ayaan u ahay in aan jid lahayn isagoo sheegay in guys kaliya ku dhuftay lamaanahooda. Waxaan this inaan ka mid yihiin sababtoo ah waa ka wax Caaasimadda qof samayn karo oo si xaqiiqo ah u joojiyaan lahaa xiriirka ka horumar iyo hubaal waa in la joojiyo. Ha u ogolaan qof kasta oo aan loo eegayn inta aad jecel iyaga ku wareegsan oo aad kala hadli haddii ay jir ahaan kugu yeelo.
Qof kasta oo kale saar In Front Waxaad of
Marka aad ku jirto xiriir muddo dheer ah, aad tahay koox. Iyagu ma ay u malaynayeen in la gelinaya qoyskooda, asxaabta, qof kasta oo idinka soo hor jeedda iyo qaadashada ay talo mar oo dhan u taliya idinkaa. On dhinaca aad u badan tahay waa in aan ku riday xaalad halkaas oo ay ku leeyihiin in ay doortaan, laakiin haddii uusan iman in wax u eg hooyadood ma aad jeceshahay oo uu doonayo inuu ku burburo aad la, haddii ay aad u jecel yihiin inay marka hore adiga iyo xiriirka saaray.
Saldhigto Waayo Best Labaad
Waxaan qabaa inaan dhan og nahay markaannu abaalmarinta gargaaridda. Waxay laga yaabaa in jacayl qof kale oo dhex dhacay ama iyagu ma ay dareemaan si la mid ah iyaga oo ku saabsan si ay u degeen aad iyo in marna ay sal wanaagsan u xiriir. Waxaan qabaa inaan dhan raadiso ekayd ah, wax kasta oo ekayd in loola jeedaa noo, iyo dad badan oo aakhirka gelida qof si aanay u noqon oo keliya oo iniinahoodu ku dhex jiraan nooc waa la fahmi karo laakiin ma ku fiican yahay marka hal dhinac uu qofku dareensan yahay sida ay nolosha qof waxaa ay ekayd halka qof kale arko waxaa sida ugu fiican ee ay samayn kari lahaa ka dib markii qofka ay jeclaayeen oo iska socday iyo xaalad la mid ah in mustaqbalka fog mar walba uu dhammaanayo faraxsaneyn.
mid ka mid No waa qumman yahay. Dhab ahaantii, shukaansi ma noqon doono mid xiiso leh ilaa xad badan haddii…
Sidaas waxa Law of Attraksjon? Si fudud u gelin waa Law Universal in…
Xiriirka waa waxa ugu cajiib ah aan yeelan karaan. Laakiin waxyaalaha muhiim ah oo dhan sida…